12 လိင်မေးခွန်းလွှာအမျိုးသမီးများတိတ်တဆိတ်ရန်အဖြေများ Want
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ပုဂ္ဂလိက Talk ကို: 12 လိင်မေးခွန်းလွှာအမျိုးသမီးများတိတ်တဆိတ်ရန်အဖြေများ Want
Topic:12 လိင်မေးခွန်းလွှာအမျိုးသမီးများတိတ်တဆိတ်ရန်အဖြေများ Wantလိင်မေးခွန်းများကို	အားဖြင့် Posted: Fisayo
သြဂုတ်လ 15, 2016
ဤနေရာတွင်ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်စို့, အမျိုးသမီးများအသံကျယ်ကျယ်ထွက်မေးမြန်းဖို့လည်းကြောက်လန့်ဖြစ်ကြောင်းလိင်အပေါ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်သူအချို့မေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရည်းစားသို့မဟုတ်ခင်ပွန်း၏မမေးနိုင်, ထိုအမှုအရာမှအဖြေကိုရှာခြင်းငှါလည်းရှက်ကြောင့်နှင့်ခြောပင်သူတို့၏မီးယပ်ရောဂါကုဆရာဝန်မမေးနိုင်. ဒါပေမယ့်စိတ်ပူစရာမှမ, မေးခွန်းများကိုအားလုံးဒီမှာမေးလျှောက်သော်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တော့ဘူးအဖြေကိုများအတွက် Google ရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်.
အဖြေကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါသည်. လူရဲ့လိင်တံအရိုးသို့မဟုတ်သံကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ဆွမှာအသွေးနှင့် engorges ကြောင်းတန်ဆာဖြစ်, သူမသည်စက်ဘီးပေါ်လည်းတက်ကြွစွာရရှိသွားတဲ့လျှင်ဒါထိပ်ပေါ်မှာတစ်တက်ကြွအမျိုးသမီးများသည်အရာထိခိုက်နိုင်. ဒါဟာကွေးနှင့်ပင်လိင်တံပေါ်ဒဏ်ရာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, ထိုအင်္ဂါမှန်ကန်သောခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ပျက်စီးနှင့်အရုပ်ဆိုးပြန်ဆိုခြင်းကိုခံရနိုငျသောကွောငျ့ဒါကြောင့်လွယ်ကူယူတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်.
ထိုကွန်ဒုံးတက်ကြွလိင်ကာလအတွင်းချွတ်ချော်ရန်အဘို့အဒါဟာအလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမရှိသလောက်ဖြစ်ပျက်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးလုပျနိုငျကိုအကောင်းဆုံးအရာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရော်ဘာ retrieve ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုယိုဖိတ်မခံခဲ့ရသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုကဲ့သို့သောကွန်ဒုံးနောက်တဖန်ပြန်သုံးကားအသစ်တစ်မရရမယ်. ဒီအဖြစ်အပျက်မကြာခဏအလွန်သေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်အတူဖြစ်ပျက်.
ငါလိင်စဉ်အတွင်း orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာရရှိရန်အတွက်အတွက်အခက်အခဲရှိပါအဘယ်ကြောင့်?
သငျသညျလိင်စဉ်အတွင်း orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ရန်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်သင်နှင့်အတူမမှားဘ​​ာမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. သမ္မာတရားကိုအမျိုးသမီးတချို့လိင်စဉ်အတွင်း orgasm ရပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်, clitoral ဆွကာလအတွင်းအခြားသူများကို, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအားဖြင့်သေးအခြားသူများကို, နှင့်အခြားနည်းလမ်းများပေါင်းစပ်မှတဆင့်အခြားသူများကို. ဒါဟာသို့သော်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထှတျအထိပျအခါတိုင်းရောက်ရှိရန်အိပ်ရာအတွက်သင့်လျော်သော Self-လေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုလိုအပ်နေသည်ဟုထောက်ပြသည်ရဦးမည်; ဤအလိင်စိတ်နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ကတည်းကမူးယစ်ဆေးပယ်နေဖို့အကောင်းဆုံးက.
ကောင်းစွာ, သမ္မာတရားကိုဆီးဖို့ခံစားချက်တစ်ခုသာခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်, မရှိသလောက်မည်သူမဆိုလိင်စဉ်အတွင်းဆီးရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရပါဘူး. ကျွမ်းကျင်သူများကအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမလိင်စဉ်အတွင်းဆီးရန်လိုအပ်သည်ခံစားရသောအခါအဆိုရ, သူကသူမ၏အထီးသူမ၏ G-spot အပျေါမှာကောင်းစွာနှိပ်သည်နှင့်ဤနီးပါး orgasm မှသူမ၏အနီးကပ်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကိုဆိုလိုသည်.
ဒီ queefing ခေါ်တကယ်တော့သင်ကအကြောင်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအနည်းငယ်သာရှိ၏. သငျသညျဆကျဆံစဉ်အတွင်း hit င်အဖြစ်သင်၏ "မီးဖို" အတွင်း၌ပိတ်မိနေလေထုလှအခါဖြစ်ပေါ်, ထိုသို့လည်းလိင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းဖွစျနိုငျ. သင့်ရဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမြည်းကြိုးကိုဖြည်သို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာရှိမရှိဒီနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်.
အများစုမှာအမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ foreplay နှင့် arousal ကာလအတွင်းအောကျစိုစွတ်ရ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြာကြာရရှိသွားတဲ့အဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီ wetness နုတ်မနိုင်. Wetness ကလွယ်ကူသည်သင်၏လူကိုသငျသညျကိုထိုးဖောက်ရန်အဘို့အကိုကလိင်စဉ်အတွင်းညှဉ်းဆဲဟုဆင့်ကိုကာကွယ်တားဆီး, သင်မူကား, foreplay သို့မဟုတ်လိင်စဉ်အတွင်းစိုစွတ်သောမရကြပါလျှင်, ထို့နောက်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆီထည့်တဲ့ Vaseline ဂျယ်လီကဲ့သို့ချောဆီကိုသုံးပါစေခြင်းငှါ,.
သင်ကနှင့်အတူအဆင်ပြေပါတယ်သို့မဟုတ်စမ်းသပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကသာသဘောတူရပါမည်. သို့သော် အကယ်. မ, သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဘာကြောင့်နားလည်ပါစေရမယ်. သင်တို့အပေါ်မှာသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်ထွက်ကိုကူညီနဲ့လုပ်ရပ်စဉ်အတွင်းဘက်တီးရီးယားနှင့် feaces မှကာကွယ်ပေးရန်ကွန်ဒုံးကိုသုံးပါရန်သေချာစေပါရန် Vaseline ဂျယ်လီသို့မဟုတ်အခြားချောတွေအများကြီးအသုံးပြုရမည်. သင်တို့ပတ်လည်လွှဲပြောင်းဘက်တီးရီးယားကာကွယ်တားဆီးဖို့အင်္ဂါဇာတ်မှစအိုကနေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကွန်ဒုံးအခြားတယောက်ပြောင်းလဲရပါမည်.
ဒါကြောင့် squirt မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အဘယ်အရာကိုဆိုလို?
Squirting လူသုတ်ရည်လွှတ်၏အမျိုးသမီးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်. သူတို့အပြင်းအထန်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ urethra မှအရည်လွှတ်ပေးရန်ကြသောအခါအမျိုးသမီးများလိင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်း squirt. ဒါဟာအားလုံးထိုအချိန်ကဖြစ်ပျက်မဆီးနှင့်အတူရောထွေးမရရမယ်, မဟုတ်ပါဘူး.
သင်တန်းသူတစ်ဦးသည်လူရဲ့လိင်တံလိင်ကာလအတွင်းကဒဏ်ရာရ၏ရလဒ်အဖြစ်ကွေးခံရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သော Peyronie ရဲ့ရောဂါရှိတယ်မဟုတ်လျှင်ဒီနေရာမှာလိုအပ်မျှအကူအညီရှိပါတယ်. သို့သော်များစွာသောလူတို့သညျ penises ကွေးပြီကြောင့်ဘာမှမဆိုလိုပေ, တကယ်တော့သူကသူဝင်သောအခါသူ့ကိုလက်ျာအရပ်တွင်သင်သည် hit ဖို့ကူညီစေခြင်းငှါ. သဘာဝကျကျ, ယောက်ျားကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားရှိ, ပုံစံမျိုးစုံ, အရောင်တွေကသူတို့လက်နက်မှကြွလာသောအခါ - အမျိုးသမီးများကွဲပြားခြားနားသောလိင်အင်္ဂါများနှင့်ရင်သားအရွယ်အစားရှိသကဲ့သို့, ပုံစံမျိုးစုံ, နှင့်အရောင်အဆင်း.
ငါလိင်တူချစ်သူ porn ကိုကြည့်သောအခါအဖွင့်ရ.
ဤသည်အချို့သောမိန်းမတို့အားဖြစ်ပျက်နှင့်အခြားသူများကိုပိတ်. စောင့်ကြည့်နှစ်ခုမိန်းကလေး porn အတွက်ထိုသို့ပြုသည့်အခါအပေါ်လှည့်ရသောသူမိန်းမတို့သည်, ဒါကြောင့်သေချာပေါက်သူတို့လည်းအခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိန်းမနှင့်ရင်းနှီးသောရအလိုရှိသောသို့မဟုတ်ချင်တယ်မဆိုလိုပါ. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အိမ်နီးချင်းအကြောင်းကို fantasize ဒါပေမဲ့သူနှင့်အတူတစ်ကယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူချင်ဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါရုံနဲ့တူ.
အတူတူဤအကြောင်းကိုပြောဆိုရန်သျောလညျးသငျလုပျနိုငျတာဘာမှမရှိဘူး - သင်မခံစားရဘူးလျှင်အထူးသဖြင့်သေးငယ်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့တဦးတည်းလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းသငျသညျနှိပ်စက်တာ. သို့သော်အခြားအရာ: မိမိအလက်နက်ကသိပ်ကြီးနှင့်သင်ကြီးမားတဲ့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုနှင့်အတူအဖြစ်အပျက်၏သင်တန်း dictate ဒါကြောင့်သင်လည်းထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်နိုင်လျှင်သင်အများကြီးချောဆီကိုသုံးနိုငျသ; နှင့်သေးငယ်တဲ့တယောက်နှင့်အတူ, သင့်ရဲ့ကောင်လေးကွဲပြားခြားနားသောရာထူးကြိုးစားပါသို့မဟုတ်ပဲသင်နှစ်သက်အားမိမိလက်ချောင်းနှင့်ခံတွင်းကိုအသုံးပွုနိုငျ.
သင်တို့ကိုဘာလိုချင်သည်ဆိုရင်သူ့ကိုပြရမယ်. အများစုကယောက်ျားရှိဆငျးသကျကိုစို့လိုပါဘူးဒါပေမယ့်သငျအိမျဆငျးသကျသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ထိုက်တန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြရမယ်. သူပါးစပ်မှာကောင်းသောမပါရှိလျှင်, ထို့နောက်သငျသညျသူ့ကိုအဆိုကိုအပေါ်အရိပ်အမြွက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကူညီရမယ်, သူသည်သင်၏ဂူ၏ထိခိုက်မခံတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းမြန်နှုန်းနဲ့ဖိအား.
ပိုသိချင်တယ်, အသုံးဝင်သော, နှင့်ကောင်းစွာသုတေသနပြုလိမ်းကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး contents တွေကို, အလည်အပတ် www.HealthFitnessResource.com
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "အမြိုးသမီးမြားရဲ့ပုဂ္ဂလိက Talk ကို: 12 လိင်မေးခွန်းလွှာအမျိုးသမီးများတိတ်တဆိတ်ရန်အဖြေများ Want"